टेक्स्ट टु स्पिच (TTS) र lifelike होलोग्राम को साथ Microsoft Hololens 2: मार्टिन Vrijland
पाठ To Spach (TTS) र lifelike holograms with Microsoft Hololens 2
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	27 सेप्टेम्बर 2019 मा	•4टिप्पणिहरु
धेरैलाई अझै यो धारणाको बारेमा शंका छ कि हामी भविष्यमा भर्चुअल संसारमा बस्न सक्दछौं। जहाँ हामी अझै हाम्रा दिमागका लागि हाम्रो ढिलो ब्यान्डविथ इनपुट च्यानलहरू प्रयोग गर्छौं, जस्तै आँखा, कान, नाक, जिब्रो, टच र यस्तै, बीसीआई (ब्रेन कम्प्यूटर इन्टरफेस) न्युरेलिंक (एलोन मस्कको कम्पनीहरू मध्ये एक) पहिले नै 2020 मा हुनेछ दिमागको साथ धेरै छिटो अन्तर्क्रिया प्रदान गर्न सक्षम हुँदै। इमानदार हुन गरौं; उदाहरणका लागि कान लिनुहोस्। कानुनी आवाज ध्वनीलाई विद्युत नाडीमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ र मस्तिष्कले ध्वनिमा अनुवाद गर्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि, बोलिएको पाठ वा संगीत। यस बीचमा त्यहाँ अनुवाद छ। बोलिएको कहानी शब्द एक शब्दको हिसाबले आउनुपर्दछ वा किताब एक एक गरेर शब्द पढ्नुपर्दछ। यो अधिक सुविधाजनक हुनेछ यदि तपाईं मस्तिष्कमा 1x मा सम्पूर्ण पुस्तक अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बीसीआईको विकासको साथ त्यो दिशामा गइरहेका छौं।
माइकोर्सोफ्ट होलोलेन्स एक्सएनयूएमएक्सको साथ अझै एक होलोग्राम प्रोजेक्ट गर्न आवश्यक छ एक अन्तरिक्षमा बढेको वास्तविकताको रूपमा। एक BCI संग तपाईं दृश्य प्रस्तुति सीधा मस्तिष्कको दृश्य केन्द्रमा राख्न सक्नुहुन्छ। सबै इन-सबै, यो सबै धेरै शानदार देखिन्छ (तल भिडियो हेर्नुहोस्)। यद्यपि यो छोटो अवधिमा हामीलाई केही पनि छैन पर्खँदै.
तल एलोन मस्कको न्युरेलिinkक प्रस्तुतीकरण हेर्नुहोस् र मेरो विस्तृत विवरण पढ्नुहोस् यो लेख (र भिडियो अन्तर्गत थप पढ्नुहोस्)।
अझै सम्म माइक्रोसफ्ट होलोलेन्स2जस्ता विकासहरू पहिले नै प्रणालीको विकासको लागि उपयोगी छन् जहाँ तपाईंले डिजिटल स्पेस सिर्जना गर्नुहुन्छ जहाँ सबैले समान वस्तुमा उही वस्तु वा समान होलोग्राम देख्दछन्, तर फरक दृश्य स्थितिबाट। गुगल विकास गरीयो क्लाउड एंकर टेक्नोलोजी र योजना सम्पूर्ण विश्वको नक्शा हो ताकि तपाईं प्रत्येक सडकमा वस्तुहरू परियोजना गर्न सक्नुहुनेछ जुन सबैले देख्न सक्दछन्; उही ठाउँमा, तर फरक कोणबाट। त्यसोभए तपाईं डायनासोर पनि सडकमा हिंड्न सक्नुहुनेछ जुन सबैले देख्न सक्दछन्। एलोन कस्तूरीको न्युरेलिink्क बीसीआईले 2020 मा पनि पशुको गन्ध लिन सम्भव बनाउँदछ, किनकि यो गन्ध मस्तिष्कको गन्ध केन्द्रमा राख्न सकिन्छ। प्रत्येक दृश्य जुन तपाईले देख्नु भएको छ वा प्रत्येक अवलोकन जुन हामीले हाम्रो शारीरिक सेन्सरहरू (आँखा, कान, नाक, इत्यादि) मार्फत गर्छौं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रममा अनुवाद गर्न सकिन्छ। डरलाग्दो कुरा चाहिन्छ सहि ब्यान्डविथ र त्यस स्पेक्ट्रमबाट सहि डाटा हो र जुन मस्तिष्कमा न्यूरो जडानको माध्यमबाट प्रोजेक्ट हुनुपर्दछ।
म तपाइँलाई टेक्नोलोजीको विकासमा किन अर्को नजर दिदैछु? किनभने त्यसोभए तपाईं भर्चुअल रियलिटी र एकलता सम्बन्धी मेरो लेखहरू बुझ्नुहुन्छ। तपाईं तल ती लेखहरू फेला पार्नुहुनेछ यो मेनु वस्तु। मेरो नयाँ पुस्तक मँ भन्छु किन यो ज्ञान यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले उल्लेखित मेनू आईटम अन्तर्गत लेखहरूमा स्वाद पाउनुहुनेछ।
के हामी यस सिमुलेशनको नतिजा नियन्त्रण गर्न सक्छौं?
माइक्रोसफ्ट होलोलिन्स2इन्टरनेट मस्तिष्क जडानसँग के सम्भव छ स्वाद
ट्याग: 2, बढ्यो, Elon, विशेष, होलोलिन्स, माइक्रोसफ्ट, Musk, Neuralink, वास्तविकता, अनुकरण, भर्चुअल
28 सेप्टेम्बर 2019 मा 07: 06
यसको बारेमा सपना देखेर हामी एउटा अद्भुत विदेशी आक्रमणको आशा गर्न सक्छौं, विशेष गरी MSM को भर्खरको रिपोर्टहरूलाई ध्यानमा राख्दै, विश्वहरूको नयाँ युद्ध पनि आउँदछ, उदाहरणका लागि।
अन्तिम कार्ड वास्तवमै आउँदैछ, कसलाई थाहा छ। वर्नर भोन ब्राउनले यस महिलाको अनुसार भनेको जस्तो देखिन्छ। शक्तिहरू जुन यस सम्पूर्ण खुलासा प्रोजेक्ट सेट अप बम बमका साथ।
यस बीच स्वर्गमा स्पेसशिपहरू उनीहरूको लागि हावा हो, के हामीले माथि हेर्‍यौं जुन उनीहरूले हामीलाई देख्न चाहन्छन्, मलाई लाग्छ उनीहरू धेरै पटक सक्षम छन्, हामी यसलाई हेर्न गइरहेका छौं।
28 सेप्टेम्बर 2019 मा 17: 18
यसको लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन, बेल्जियम एबी बियरको ट्रे पहिले नै आइसकेको छ। सर्ज मोनास्टले पनि मध्य बर्षको एक्सएनयूएमएक्समा यसलाई प्रोजेक्ट निलो बीम भनेर भनेका थिए। हामी राम्ररी क्लासिक टीआर-एक्सएनयूएमएक्सबी का भेरियन्टहरू देख्न सक्छौं। मैले मेरो रात क्यामेराको साथ धेरै नै स्पट गरेको छु, केहि 90-3 फुटबल क्षेत्रहरू भन्दा ठूलो .. NATO आधारहरू लोकप्रिय जस्तो देखिन्छ।
फोल्डिंग कुर्सी पहिले नै तयार छ ...
29 सेप्टेम्बर 2019 मा 19: 55
HAARP र मन नियन्त्रण - बस तथ्यहरू
1 अक्टोबर 2019 मा 09: 59
« पोप फ्रान्सिसले विश्व नेताहरूलाई भ्याटिकनमा एक्सएनयूएमएक्समा मे एक्सएनयूएमएक्समा वैश्विक सम्झौताको लागि बोलाउँदछन्
Greta Thunberg 'आलोचक लि gender्ग-प्रतिक्रियावादी नैतिक रूपमा दिवालिया बाल-मित्रैलो कायरहरू हुन्': कारणको अन्त »
कुल भ्रमण: 110.526
मार्टिन भिजल्याण्ड op शेल्फहरू खाली हुनु अघि होर्डिard गर्ने समय
क्यामेरा2op शेल्फहरू खाली हुनु अघि होर्डिard गर्ने समय
क्यामेरा2op राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम: "२२ - हप्ताको टेस्ट लिनुहोस्!" .. तपाईंको बच्चालाई हर्माफ्रोडाइट बनाइनेछ
मार्टिन भिजल्याण्ड op राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम: "२२ - हप्ताको टेस्ट लिनुहोस्!" .. तपाईंको बच्चालाई हर्माफ्रोडाइट बनाइनेछ
जान हल्याण्ड op रसियाली बमवर्षकहरूले सिरियामा टर्कीको बख्तरबन्द गाडीहरू नष्ट गरे, अवस्था तीब्र भयो